Risina kushambadzira chitoro, ndeapi matambudziko emakambani emakambani anofanirwa kutarisisa! -Company Nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Unmanned shopu, ndeapi matambudziko emakambani emakambani anofanirwa kutarisisa!
Nongfu Chitubu, Wahaha, Vanoda Vanoda, Kubatana, Master Kong, Mhuri Yakanakira, Jingkelong, Chitoro Chakanaka, uye yanhasi isinganetsi yekutengesa chikamu, zvichienzaniswa nemakore anotonhorera emakore apfuura, ari kutotekenyedza kwese kwese, iine zvakawanda zvekutengesa cheni zvinobatsira uye chiteshi zviwanikwa . Makambani emabhizimisi apinda mumusika, izvo zvakaunza nzira dzakasiyana kumhizha. Kune rimwe divi, zvakakonzerawo kuti musika utange kufunga zvakanyanya nezvekuti mabhizimusi emabhizimusi anogona sei kuendesa nzira dzisina kutengeswa dzekutengesa.
Ndeapi akakosha mapoinzi ekuzvimiririra kwekupararira kweasina kutarisirwa nzira dzekutengesa dzemakambani emakambani?
Pfungwa 1: Terminal Mutengo uye Kudzoka
Mutengo uye kudzoka inyaya yekusingaperi mune chero bhizinesi. Kunyangwe isina kutengesa zvitoro ine zvimwe zvakanakira zviwanikwa zvevanhu uye rendi, mutengo wekutakurwa kukuru kwemichina yekutengesa, midziyo ine hungwaru kana zvitoro zvisina kugadzirirwa zvichiri zvakakwirira nekuda kwenzvimbo yazvino yekuvandudza tekinoroji yekutengesa isina kurongwa. Naizvozvo, nepo pasina nzira dzekutengesa dziripo dzemabhizimusi emabhizimusi, ivo vanofanirwa kuita basa rakanaka remutengo wakadzama uye kudzosera kuverenga, kwete nekukurumidza kumhanyisa kudyara munhenga dzehuku kunzvimbo yekupedzisira.
Pfungwa yechipiri: Teerera kuhukama huripo pakati pehunhu hwehunhu uye vatengi'demands
Nekuti nharaunda yekushandisa, kuziva uye maitiro emapoka makuru evatengi zvachinja zvakanyanya, mabhizinesi emakambani anofanirwa kutarisa zvizere hukama huri pakati pehunhu hwavo hwezvinhu nevatengi vanodikanwa pavanogovanisa bhizinesi rezvitoro zvisina kurongeka vakazvimiririra. Kureba kwetambo yechigadzirwa, kuomarara kwechigadzirwa, chigadzirwa zera hunhu uye zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa mashandiro echiteshi mune chairo bhizinesi. Mabhizimusi emabhizimusi anofanirwa kutora vatengi senzvimbo yepakati uye kuenzanisa hunhu hwezvinhu zvinosangana nezvinodiwa zvemapoka makuru evatengi.
Pfungwa Yakakosha 3: Bhizinesi Kudzora System Kuvaka
Bhizinesi rekudzora system rine zviyero zviviri, imwe iri yemukati kutonga, imwe ndeye chiteshi kudzora. Kunyangwe iyo nenjere nhanho yezvisina kumisikidzwa zvitoro zviteshi zvakakwirira kwazvo, zvinoenderana neruzivo rwekuita, zvese zvemukati nekunze zvinoda kushandisa yakawanda simba kusimbisa inoenderana kutonga system. Yemukati senge yekushandisa system, yekunze senge chiteshi kudzora, anti-kubiridzira, kuchengetedzwa kwemidziyo uye zvichingodaro. Unmanned chitoro chiteshi chiteshi chitsva chine hutano hwakakura uye musiyano. Iyo yekudzvanya sisitimu nyowani chiteshi haifanire kungo chengetedza chete humwe hunyanzvi kuchinjika, asi zvakare chengetedza chiteshi kurongeka uye kuvandudza bhizinesi rebhizinesi. Naizvozvo, kumabhizinesi mazhinji emakambani, kutarisana neiyi chiteshi mukana uye chinetso.
Prev: 30 michina yekunze yekutengesa munyika, wakamboishandisa here?
Zvadaro: Iyo ramangwana rekusatarisira vending muchina